केटीको चक्करमा बर्बाद बाबाहरु ! हेर्नुहोस् को – को छन्… - Kendra Khabar
केटीको चक्करमा बर्बाद बाबाहरु ! हेर्नुहोस् को – को छन्…
२०७५, २९ कार्तिक बिहीबार ०५:३१
मानव कल्याणका लागि व्यापार–व्यवसायको साम्राज्य निर्माण एवं परोपकारमा त्यसको आम्दानी खर्च गर्ने कुरालाई त जायज नै मान्न सकिएला, तर कतिपय बाबा त्यही आफ्नो बिजनेस र बाबा पदको आवरणमा अनैतिक कर्ममा समेत संलग्न पाइँदै आएका छन् । खासगरी भारतीय समाजमा ठूलो धार्मिक साम्राज्य खडा गरेका र समाजमा चर्चामा रहेका बाबाहरू नै सुरा–सुन्दरीहरूमा लहसिएर विवादमा तानिएका पाइन्छन् । अझ रोचक त के छ भने यस्ता कर्मकाण्डी बाबाहरू जेलको हावासमेत खाइरहेका छन् । यस्तै, घटना गत हप्ताको सोमबार प्रमाणित नै भयो । ५० वर्षीय चर्चित बाबा गुरमित रामरहिम सिंह दुई महिलालाई बलात्कार गरेको प्रमाणित भएपछि जेल गए । रामरहिम भारतमा सुन्दरी र यौनसँग जोडिएर बदनाम हुने अनि विवादमा तानिने एक्ला बाबा भने होइनन् ।
उत्तर प्रदेशको बाराबान्कीका बाबा परमानन्द उर्फ रामशंकर तिवारीमाथि लागेको आरोपअनुसार सन्तान दिने नाममा उनी महिलामाथि बलात्कार गर्थे अनि त्यसको भिडियो बनाएर उनीहरूलाई ब्ल्यामेकल गर्दै निरन्तर शारीरिक शोषण गर्थे । बाबा परमानन्दविरुद्ध १२ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । एक पटक बाबाको आश्रमको एउटा कम्प्युटर बिग्रियो । त्यसलाई मर्मत गर्न हार्डवेयर पसलमा पठाइयो ।
पसलेले कम्प्युटर बनाउने क्रममा आश्रममा तयार पारिएको एउटा अश्लील भिडियो फेला पारे, जसलाई उनले भाइरल बनाइदिए । त्यसपछि पुलिसले बाबाको बारावान्कीस्थित आश्रममा छापा मार्‍यो र त्यहाँबाट अश्लील भिडियोका सिडी तथा अश्लील साहित्यका पुस्तकहरू पनि बरामद भए । पुलिसले परमानन्दलाई २४ मई २०१६ मा गिरफ्तार गर्‍यो । ६५ वर्षीय यी बाबा अहिले लखनउ जेलमा सजाय काटिरहेका छन् ।
गुरमित रामरहिम सिंह – गुरमित रामरहिम सिंह विश्वभर ५ करोड अनुयायी भएको भनिएको डेरा सच्चा सौदाका प्रमुख हुन् । हरियाणा राज्यको सिरसास्थित डेरा सच्चा सौदाका अन्य विभिन्न ठाउँमा पनि शाखा छन् । दुई महिलामाथि बलात्कारको आरोप प्रमाणित भएपछि पंचकुलास्थित सीबीआई अदालतले उनलाई २० वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो । २८ अगस्ट २०१७ देखि उनी जेलजीवन बिताइरहेका छन् । आफूलाई धार्मिक गुरु, सामाजिक लिडर, अभिनेता, निर्देशक, गीतकार तथा रकस्टार बताउने यी बाबाविरुद्ध सन् २००२ मै सिरसास्थित डेरामा साध्वीविरुद्ध बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो जुन १५ वर्षपछि प्रमाणित भएको हो ।
विवादित तान्त्रिक चन्द्रास्वामी राजस्थान निवासी हुन् । सन् १९४८ मा जन्मिएका चन्द्रास्वामीको वास्तविक नाम नेमीचन्द जैन थियो । उनको सिंगो जीवन विवादकै घेरामा छ । नेतादेखि अभिनेतासम्ममा उनले आफ्नो जादु चलाए । राजनेताहरूमाथि चन्द्रास्वामीजति प्रभाव पार्ने सायदै अन्य कुनै ज्योतिष वा धर्मगुरु होलान् । चन्द्रास्वामी कतिसम्म प्रभावशाली थिए भने नरसिंहा राव भारतको प्रधानमन्त्री हुँदा उनी समय नै नलिई उनीसँग भेटघाट गर्न सक्थे ।
किसिङ बाबा – केही दिनपहिले सोसल मिडियाका भारतीय प्रयोगकर्ताहरूमाझ एक बाबाले एउटी युवतीसँग चुम्बन गरिरहेको तस्बिर भाइरल भयो, जसमा हाइवेमा बाबा र युवती देखिन्छन् । उक्त तस्बिर भाइरल भएपछि तस्बिरमा देखिएकी युवतीले प्रहरी समक्ष छिमेकी युवाविरुद्ध उजुरी हालेकी थिइन् । आफ्नो उजुरीमा उनले ती युवाले आफ्नो बदनामी गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएकी छिन् ।
सामाजिक सञ्जालमा युवतीले भारतीय प्रहरी समक्ष गरेको उजुरीको कपी पनि भाइरल भएको छ, जसमा युवतीले आफ्नो ठेगाना नयाँदिल्ली लेखेकी छिन् । रिपोर्टहरूका अनुसार युवतीले हौज काजी पुलिस थानाको अपराध शाखामा ३० अगष्टमा उजुरी हालेकी हुन् । उनले आफ्नो उजुरीमा गलत तस्बिर राखेर आफ्नो बदनामी गरिएको दाबी गरेकी छिन् । यता बाबाले भने आफूलाई फसाउन कसैले षड्यन्त्र गरेको दाबी गरेका छन्, तर युवतीले आफूले बाबालाई चिन्ने कुरा भने स्वीकार गरेको बताइएको छ । साप्ताहिकबाट साभार